China 45 HRC Carbide 3 Flute Roughing End Mill mpanamboatra sy mpamatsy | Mingtaishun
Trano fanatobiana entana
Mill Nose End Mill
Mill Mill End
End mill ho an'ny aliminioma
Drills amin'ny fitsikerana
HRC45 Fihodinan-drivotra mahery vaika (3D)
HRC55 Fihodinan-drivotra mahery vaika (5D)
Tombony amin'ny serivisy
60 HRC Carbide 2 Flute standard halavan'ny baolina ...
65 HRC Carbide 4 Flute fenitra halavany zoro R ...
HRC65 Carbide Length 2F Ball Nose End Mill
45 HRC Carbide 4 Flute fenitra halavan'ny zoro R ...
45 HRC NC fitsikilovana fizahana
Mpanondrana 8 taona mitrandraka farany - 55 HRC Carbide ...
Vidiny tsara indrindra ho an'ny setran'ny Ball Nose End - 55 HRC ...
45 HRC Carbide 3 Faran'ny fikosoham-pilao
Ny famolavolana roa sosona dia manatsara ny fahamendrehana sy ny famaranana amin'ny fomba mandaitra. Ny fanapahana ny sisin'ny afovoany dia mampihena ny fanoherana. Ny fahaizan'ny junk slot dia manome tombony amin'ny fanesorana ny puce ary mampitombo ny fahombiazan'ny milina. Ny famolavolana flutes 3 dia tsara amin'ny fanesorana puce, mora amin'ny fanodinana feed vertika, be mpampiasa amin'ny slot, profile, ary hole hole.
Firaka vita amin'ny varahina
Cat.No D Lk d L sodina Sary No.
1 Ny mpanjifa dia mandefa fangatahana amin'ny antsipiriany amin'ny alàlan'ny mailaka na rohy hafa.
2 Mamaly amin'ny vidiny, ny masontsivana, ny fonosana, ny sary ary ny antsipiriany hafa izahay.
3 Samy manaiky ny vidiny izahay roa ary manamafy ny pitsopitsony.
4 Manoratra ny faktiora proforma izahay ary mandefa izany amin'ny mpanjifa.
Mpanjifa 5 no mametraka petra-bola.
6 Manao santionany amin'ny famokarana betsaka izahay.
7 Izahay dia mandefa santionany amin'ny vokatra marobe na mandefa sary amin'ny mpanjifa ho fankatoavana.
Mpanjifa 8 no manamafy ny santionany amin'ny famokarana betsaka.
9 Nanomboka famokarana betsaka izahay. (manana tahiry goavambe ho an'ny ankamaroan'ny fikosoham-bary farany izahay)
10 Mampiseho ny sarin'ny vokatra vonona izahay na ny mpanjifa manadihady eo amin'ny tranokala.
11 Ny mpanjifa dia mandoa fandoavambola.
12 ny fandefasana dia alamina.
Fanamarihana 13 avy amin'ny mpanjifa ho an'ny asa tsara kokoa amin'ny ho avy.
Manaraka tsara ny serivisy ho an'ny mpanjifa izahay ary mankamamy ny mpanjifa tsirairay. Notazominay foana ny lazanay teo amin'ny sehatry ny indostria nandritra ny taona maro. Marina izahay ary miasa amin'ny fananganana fifandraisana maharitra amin'ireo mpanjifantsika.
"Ny kalitao tsara sy ny vidiny mirary" no fitsipiky ny orinasanay. Raha liana amin'ny vokatray ianao na manana fanontaniana dia aza misalasala mifandray aminay. Manantena izahay fa hanorina fifandraisana iaraha-miasa aminao ato ho ato.
Manantena ny ho avy, hifantoka bebe kokoa amin'ny fananganana marika sy fampiroboroboana izahay. Ary mandritra ny fizotry ny lamina stratejika manerantany dia raisinay ireo mpiara-miombon'antoka maro kokoa hanatevin-daharana antsika, hiara-hiasa amintsika mifototra amin'ny tombotsoan'ny tsirairay. Andao hampivoatra ny tsena amin'ny alàlan'ny fampiasana tanteraka ireo tombony feno ananantsika ary hiezaka hanorina.
Miaraka amin'ny kalitao tsara, ny vidiny mirary ary ny serivisy tso-po dia manana laza tsara izahay. Aondrana any Amerika Atsimo, Aostralia, Azia atsimo atsinanana sns ny vokatra. Tongasoa tsara ireo mpanjifa ao an-trano sy any ivelany hiara-hiasa aminay amin'ny ho avy mamiratra.
Teo aloha: 45 HRC Carbide 2 Flute Standard Length End Mills ho an'ny Aluminium
Manaraka: 45 HRC Carbide 3 Flute Roughing End Mill ho an'ny alumium
Ny orinasa dia mampiroborobo fatratra ny kolontsain'ny orinasa miavaka, ny fikatsahana ny hatsarana, ny fifikirana voalohany amin'ny mpanjifa, ny filozofia momba ny fandraharahana voalohany, ary ezahina ny hanome ny mpanjifa vokatra tsara, mahomby kokoa.
Mills farany orona baolina
Mills farany Carbide End
45 HRC Carbide 2 Flute standard halavan'ny famaranana ...
45 HRC Carbide 3 sodina fenitra halavan'ny famaranana ...
HRC45 Carbide fenitra halavany fandavahana
65 HRC Square End mill-4 Flute
Mino izahay amin'ny fampiasana ny herin'ny fiaraha-miasa matanjaka, nahazo ny fahatokisana izahay hanome vahaolana famotehana vy vaovao sy traikefa tsara ho an'ny fahombiazanao.